Ubomi obuxokayo babantu abadala, iinyaniso eziphazamisa iimvakalelo | Uncwadi lwangoku
Ubomi bobuxoki babantu abadala
NgoSeptemba 2020 umbhali wase-Itali u-Elena Ferrante wapapasha inoveli yakhe Ubomi bobuxoki babantu abadala, Ukuba yimpumelelo yokuhlela engenakuphikwa. Ngapha koko, inyani yokungazi ukuba ngubani umbhali-inikwe ukungaziwa-yenza inoveli ibonakale inomtsalane eluntwini. Ngale ndlela, libali lokufumanisa okwenziwa yintombazana malunga nemikhwa efihliweyo yabantu abadala.
Phantsi kwale mpikiswano, singqina ibali lempikiswano enokubakho eyaqala kwishumi elivisayo ngenxa yokutyhilwa kwenyaniso ephazamisa iimvakalelo. Ke, umbalisi, uGiovanna, ubalisa amava akhe kumntu wokuqala kwaye aqiniseke, ngaphandle kokuhlekisa, umfundi ngeziganeko. Kwangelo xesha, uhlobo lobunzima kunye nomanyano lwenziwa kwi-protagonist.
1 Malunga nombhali, u-Elena Ferrante
1.1 U-Elena Ferrante, imveliso yoncwadi lwakhe
1.2 Phantse amashumi amathathu eminyaka uncwadi
2 Amagqabantshintshi oBomi obuXokayo baBantu abaDala
2.1 Indlela yokuqala
2.2 Iimfihlo zosapho
2.3 Iincwadi njengendlela yokuphendula
3 Uhlalutyo olufutshane lwencwadi ethi The Lying Life of Adult
3.1 Umxholo wencwadi
3.1.1 Ukukhangela ithemba kunye nolwazi
3.2 Isitayile esoyisa abafundi
Malunga nombhali, u-Elena Ferrante
Isichazi esingaqondakaliyo kulo mbhali yinto engaphephekiyo okoko kwapapashwa kwinoveli yakhe yokuqala phantse kumashumi amathathu eminyaka eyadlulayo. Ewe, Ukuza kuthi ga ngoku, isazisi sombhali asiqinisekanga, ngaphaya kodliwanondlebe nge-imeyile. Kuyaziwa kuphela ukuba -kucingelwa ukuba-wazalwa kwi-1943 eNaples, e-Italiya kwaye u-Elena Ferrante ligama elisisilo.
Ngezi zizathu, kukho umxholo kuphela malunga nombhali. Ngapha koko, abanye babafundi bakhe bakholelwa ukuba iinoveli zakhe yimifanekiso engobomi bakhe. Ngokuhambelana, upapasho ngalunye olutsha lukhatshwa ziithiyori kunye nophando lokufumanisa ukuba ngubani na u-Elena Ferrante. Ke ngoko, olona luqhelekileyo lobomi bomntu malunga nombhali ziphawulwe lincwadi zakhe.
U-Elena Ferrante, imveliso yoncwadi lwakhe
Eli tyala ayilo lokuqala lombhali wase-Italiya ogqiba ekubeni angaziwa. Kodwa, into engathandabuzekiyo kukuba, njengoko i-portal yeAmazon isitsho, lo mfazi "ngowona mfihlelo mkhulu kuncwadi lwangoku." Kanye apho, kuthiwa "inika umdla abafundi abangama-20.000.000 kumazwe angama-46" kwihlabathi liphela. Ukwengeza, Ubomi bobuxoki babantu abadala yenye yeencwadi ezili-100 eziphambili ezikhethwe yile magazini ixesha.
Ngenxa yoko, ungumbhali wokwenyani ngokubhekisele kuncwadi lwakhe. Ngokufanelekileyo, U-Elena Ferrante (okanye nokuba ungubani na) ngumbhali kuba iinoveli zakhe (ngaphezulu kwako konke) zinika ubomi boluntu. Emva koko kunokuthiwa iinoveli zakhe zenza iseti yamaxwebhu ayinyani ayinyani malunga nomyili weetekisi.
Phantse amashumi amathathu eminyaka uncwadi
Kuyaziwa ukuba u-Elena Ferrante waduma kuyo yonke iYurophu ngo-2011 xa wayeqala ukupapasha ngasemva kweencwadi ezine. Kokugqibela, kwaziwa njenge Abahlobo ababini, Inoveli yesine yaphuma ngo-2015 (ngeSpanish) yamkelwe kakhulu. Ngoku eyakho Ukupapashwa kokuqala kwakuse-Italiya ngo-1992, Uthando olucaphukisayo, Ukushicilela kwakhona ngo-2002 Iintsuku zokushiywa.
Emva kwexesha, wapapasha Intombi emnyama (2006), inoveli enezibali ezinamandla kunye nabalinganiswa abangaqondakaliyo, apho ibonakalise iimpawu zokuvela kwendalo. Emva, njengoko bekutshiwo ngaphambili, wapapasha i-tetralogy yakhe yokuzahlulela phakathi kwe-2011 kunye ne-2015. Okokugqibela, ngokusungulwa kwe Ubomi bobuxoki babantu abadala (2020), u-Elena Ferrante wazenzela njengesiqhelo soncwadi.
Isishwankathelo se Ubomi bobuxoki babantu abadala
Kule noveli ka-Elena Ferrante, Njengomntwana, uGiovanna ufumanisa ukubhubha kobuxoki kwindawo yakhe yothando, eyabazali bakhe. Oku kwenzeka xa esiva utata wakhe ethetha (ngaphandle kokwazi kwakhe) kububi bentombi yakhe. Ngale ndlela, intombazana kufuneka ijongane nenyani entsha, apho iqondayo indlela abantu abadala abaxoka ngayo, nkqu nakwabo basondeleyo kubo.
Ukungaphepheki, intombazana encinci ichaphazelekile bubuxoki kunye nokuziphatha kosapho lwayo (ilungu le-Neapolitan bourgeoisie yee-1990s). Ke uGiovanna ukhumbula ukuba utata wakhe wathi "umbi njengo-anti wakhe uVittoria", umntu angamaziyo.
Ngenxa yoko, uqala ukukhangela lo makazi kunye nokukrokrela usapho ade adibane noVittoria, okwimeko yezoqoqosho ephantsi. Kancinci u-Giovanna uyaqonda ukuba umakazi wakhe ngumfazi ochaphazelekayo onobomi obungalawulekiyo, wahluke kakhulu kubomi bemihla ngemihla babazali bakhe, iingqondi kunye noohlohlesakhe.
Iincwadi njengendlela yokuphendula
Ngenxa yeemeko ezichazwe kwimihlathi edlulileyo, uGiovanna (umfundi oqhelekileyo) untywilisela ngakumbi ezincwadini. Ukwengeza, ukufikisa kungenisa ukubaluleka kokufunda kunye nemfundo ngokubanzi. Kule meko, uRoberto uvela, utitshala omkhuthazayo ukuba afune rhoqo ukufunda okutsha kunye nokubeka ulindelo oluphezulu ngaye.
Ngale ndlela, Ingxelo iyaqhubeka-igubungela ixesha elimalunga neminyaka emine- kunye namanye amabali amancinci ahambelana nebali eliphambili. Sele isiphelo Ubomi bobuxoki babantu abadala, Ukuqinisekiswa kwentombazana kuye kube "kukuthandabuza okuyimfuneko." Okwangoku, akukho nto ithethwayo kwaye eyona nto ibalulekileyo kukufumana ulwazi olutsha ngaphandle kokuthintelwa okanye ukunyanzelwa.
Ubomi obuxokayo ...
Uhlalutyo olufutshane lwencwadi Ubomi bobuxoki babantu abadala
Kule noveli yakutshanje ngu-Elena Ferrante kukho imixholo eliqela edibeneyo kuphuhliso lweziganeko. Phakathi kwezi zihloko, uninzi lujikeleze uthando kunye nobuxoki. Kunjalo, Uthando ngumxholo wendalo iphela, kodwa umbhali uyasondela kulutsha ofumanisa icala lakhe elilungileyo nelibi.
Ukukhangela ithemba kunye nolwazi
Ubomi bobuxoki babantu abadala ubalisa ukuwa kwento elungileyo yokulunga ebuntwaneni eGiovanna, umlinganiswa ophambili, ngenxa yobuxoki obenzakalisayo. Nangona kunjalo, lo ufikisayo, ejongene nokufumanisa inkohliso ekufutshane, ubona indlela yokuphuma ekukhangeleni inyani ... ithemba liba ngumcimbi wokumisela.
Ngokuqinisekileyo, umlinganiswa ophambili uhlangabezana nokungqubana okubalulekileyo, okubalulekileyo ekukhuleni kweemvakalelo zentombazana kwinqanaba elintle kakhulu. Ingqondo yomfazi uGiovanna ixhomekeke kakhulu kukuzifumanisa ngokwakho nakwiimvakalelo. Ngubani ofikelela kwizityhilelo ezithile ngokubaluleka kwembonakalo yabantu.
Isitayile esoyisa abafundi
Impumelelo ye Ubomi bobuxoki babantu abadala Ayikho kwimfihlakalo yokuba ngubani umbhali. Ngamanye amagama, akulunganga ukuba ungayiqwalaseli imeko yoncwadi ka-Elena Ferrante. Ngokuhambelana, kubalulekile ukuyenza icace loo nto Isitayile esingena ngaphakathi somntu wokuqala obandakanyeka ngokwenene kubafundi.
Ngenxa yoko, ingxelo ebaliswa lilizwi eliphambili ikhupha isiphumo sokusondela, esithumela ubungqina bentombazana ngokunyaniseka. Ngapha koko, kwakamsinya nje ukuba eli bali liqale, abafundi bahlala beziva beqwalaselwe kulo kwaye bafuna ukuhamba nalo kuphando lwalo kude kube sekupheleni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Ubomi bobuxoki babantu abadala
UBernard Minier. Uphengululo lothotho lwakhe nguMajor Martin Servaz
Ababhali bemihla ngemihla baseChile